किन दियो डब्ल्युएचओले यस्तो कडा चेतावनी ? विश्वभर त्रास — Imandarmedia.com
किन दियो डब्ल्युएचओले यस्तो कडा चेतावनी ? विश्वभर त्रास
एजेन्सी । कोभिड-१९ का कारण विश्वभर झन्डै १ लाख १५ हजार स्वास्थकर्मी तथा केयर वकर्सले ज्यान गुमाएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) का प्रमुख टेडरोस अद्हानोम ग्रिबियससले बताएका छन् ।
‘धेरै संक्रमित भएका छन् । हाम्रो अनुमानमा कम्तिमा १ लाख १५ हजार स्वास्थ्यकर्मी र केयर वकर्सहरुले अन्यको सेवा गर्ने क्रममा आफ्नो ज्यानको मूल्य चुकाएका छन्’ विश्वभरका स्वास्थ्यकर्मीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै ग्रिबियससले भने ।
तपाईलाई मधुमेह छ भने कोरोनाका यी पाँच लक्षणलाई बेवास्ता नगर्नुहोस
दीर्घ रोगीका लागि कोरोना थप खतरनाक साबित भइरहेको छ । मधुमेह पनि ती दीर्घ रोगमध्ये पर्छन् जसले कोरोनाका बिरामीको समस्यालाई थप बढाइरहेको छ । हुन त कोरोनाको दोस्रो लहरले स्वस्थ व्यक्तिहरुलाई पनि आफ्नो चपेटामा पारिरहेको छ तर पनि मधुमेहका रोगीमा यसको गम्भीरता अलि बढी नै देखिएको छ ।
ब्लड सुगरको खराब स्तरले इन्सुलिनको उत्पादनमा असर पार्छ र यसका कारण प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुन्छ । यसबाहेक मधुमेहका बिरामीको रक्त सञ्चार पनि राम्रो हुँदैन त्यसैले उनीहरुलाई निको हुन अलि समय लाग्छ ।
मधुमेहका बिरामीलाई यदि कोरोना भएको छ भने यसका लागि भाइरल लोडसँग लड्न थप मुश्किल हुनेगर्छ । यतिमात्रै होइन, उनीहरुमा अन्य थुप्रै रोग देखिने खतरा बढ्ने गर्छ । कोरोना भएपछि मधुमेहका बिरामीमा मुटु, साससँग सम्बन्धित समस्या र फोक्सोको रोग लाग्ने सम्भावना बढ्ने गर्छ ।
मधुमेहका रोगीलाई कोरोनाका अन्य केही लक्षण पनि महसुस हुन सक्छन् । यदि समयमा नै ध्यान नदिए यो घातक पनि हुनसक्छ । आउनुहोस्, त्यस्ता लक्षणबारे जानकारी लिऔं जसलाई नजरअन्दाज गर्नु भारी साबित हुनसक्छ ।
छालामा डाबर र नङमा असरः दोस्रो लहरमा धेरै मानिसहरुलाई साधारण लक्षण अघि छालामा डाबर देखिने, सुन्निने वा एलर्जीजस्ता समस्या महसुस भइरहेको छ । जस्तै कि हात–खुुट्टाका नङमाथि असर देखिन थाल्छ र छालामा रातो धब्बाजस्तो लक्षण ती कोरोनाका बिरामीमा धेरै पाइएका छन् जसको ब्लड सुगर लेभल अत्यधिक छ ।
मधुमेहका बिरामीको घाउ चाँडै निको हुँदैन । हाई ब्लड सुगरका कारण छाला अत्यधिक रुखो हुन्छ । यसबाहेक छाला सुन्निने, रातो धब्बा, फुस्रो हुने सम्भावना बढ्ने गर्छ । यी सबै चिज कोरोना लाग्दा पनि हुनसक्छ । त्यसैले मधुमेह भएका कोरोनाका बिरामीले आफ्नो छालाको विशेष ध्यान राख्न आवश्यक छ र सुरुवाती लक्षणमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
कोभिड निमोनियाः कोरोनाका बिरामीलाई निमोनिया खतरनाक साबित हुनसक्छ । विशेषगरी उनीहरुलाई जसलाई पहिले नै मधुमेहको खतरा छ । बढेको ब्लड सुगरले साससँग सम्बन्धित समस्या बढाउँछ जसका कारण कोरोना थप गम्भीर हुने गर्छ । डाक्टरका अनुसार मधुमेह उच्च भइरहेका बेला भाइरस निकै सजिलै शरीरमा फैलिने गर्छ र अन्य अंगलाई खराब गर्न थाल्छ ।
अक्सिजनको कमीः दोस्रो लहरमा कोरोनाका बिरामीमा अक्सिजनको कमी सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । मधुमेहका बिरामीको प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुने बित्तिकै ती मानिसहरुमा अक्सिजनको कमीको खतरा थप बढ्ने गर्छ । मधुमेहका बिरामीलाई सास फेर्न समस्या र छाती दुख्नेजस्ता लक्षण बढी पाइएको छ । यसबाहेक हाइपोक्सियाको पनि सबैभन्दा बढी खतरा मधुमेहका बिरामीलाई नै देखिएको छ । हाइपोक्सियामा बिन कुनै लक्षण अक्सिजन लेभल कम हुन थाल्छ ।
ब्ल्याक फंगसः कोभिड–१९ मा ब्ल्याक फंगसको खतरा अचानक बढ्दै गइरहेको छ । यसका कारण मानिसहरुको टाउको दुख्ने, आँखा कमजोर हुने र सुन्निनेजस्ता लक्षण देखिएका छन् । कतिपय अवस्थामा त यसका कारण बिरामीको ज्यान पनि गइरहेको छ । यो विशेषगरी कोरोनाबाट निको भइसकेका ती बिरामीलाई भइरहेको छ जसको ब्लड सुगर असाध्यै धेरै हुन्छ वा उनीहरुलाई स्टेरोइडको बढी डोज दिइएको छ ।
स्वास्थ्यमा यस्ता मस्या देखिए तत्काल परीक्षण गर्न चिकित्सकले दिए सुझाव
नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो लहरको कोरोना तीव्ररूपमा फैलिएकाले रुघा, खोकी, ज्वरो, जीउ दुख्नेलगायत स्वास्थ्य समस्या हुँदा जाँच गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
पहिलो चरणमा कोरोनाले युवालाई फरक पर्दैन भनी बेवास्ता गरेकामा दोस्रो चरणमा धेरै युवालाई समातिरहेको छ । बालबालिका पनि प्रभावित हुन थालेका छन् । अझ तेस्रो चरणमा बालबालिकालाई धेरै असर गर्ने विज्ञको अनुमान सार्वजनिक भइरहेका बेला स्वास्थ्य सजगता अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । बिरामीले आफैँ औषधि किनेर खाने नगरी चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दासले दिए ।
जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकलाई खोप नलगाएसम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । प्रशस्तमात्रामा सुत्न, यथेष्ट मात्रामा पानी पिउन पनि उनले सल्लाह दिएका छन् । छ दिनभन्दा बढी ज्वरो आए घरमा नबसी तत्काल चिकित्सककहाँ जान चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् । दोस्रो लहर अझै १० दिनसम्म रहनसक्ने दासको भनाइ छ । दोस्रो चरणमा धेरैलाई निमोनिया भइरहेको छ ।
कार्यक्रममा पूर्व मुख्यसचिव एवं सफाइ महाअभियानका मुख्य अभियानकर्मी लीलामणि पौडेल, अभियानकर्मी राजकुमार भट्टराईलगायतले आम मानिसमा चेतना जागृत गर्न जुम प्रविधिका माध्यमबाट साप्ताहिक रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । महाअभियानले प्रत्येक दिन बिहान साढे छ बजेदेखि एक घण्टासम्म कोरोनाबाट बच्न सहयोग पुग्ने प्राणायाम, योगासनलगायत साधनासमेत गराइरहेको छ ।
मालीका राष्ट्रपतिलाई रिहा गर्न राष्ट्रसंघको माग
मालीस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनले राष्ट्रपति बह एन्ड र प्रधानमन्त्री मोक्टर ओउएनेलाई तत्काल रिहा गर्न मागे गरेको छ । उनीहरुलाई सैनिकले हिरासतमा रहेको खबर सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रसंघले यस्तो माग गरेको हो ।
फ्रेन्च भाषामा ट्वीट गर्दै राष्ट्रसंघीय सिमनले खराब बन्दै गएको पश्चिम अफ्रिकी देशमा शान्तिका लागि आव्हान गरेको छ । यसअघि सैनिकहरुले राजधानी बामाको नजिकै रहेको काटी सैन्य क्याम्पमा अन्तरिम राष्ट्रपति एन्ड ओउएनेलाई लगिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
यससँगै देशमा दोस्रो कु हुनसक्ने त्रास फैलिएको छ । रक्षामन्त्री सोलीमाने डोउकोरे पनि हिरासतमा रहेको बताइएको छ । मालीमा सरकार पुनर्गठन भएको केही घण्टामै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पक्राउ परेका हुन् । पुनर्गठनका क्रममा गत वर्षको कू मा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका दुई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सरकारबाट हटेका थिए । मालीमा नौ महिनाअघि मात्रै सैन्य कु भएको थियो ।
जसकारण तत्कालीन राष्ट्रपति बोउबकर केइटा पदबाट हटाइएका थिए । त्यतिबेला सेनाले गरेका सुधार र हत्ता हस्तान्तरणका वाचा पूरा गर्नमा ढिलाई गरेपछि अहिले जनता आक्रोशित बनेका छन् । छोटो समयमै फेरि अस्थिरता निम्तिएको छ ।
पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक मालीको सेनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएकोथियो। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार गत भदौमा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको मालीको सेनाले सोमबार अन्तरिम सरकारका राष्ट्रपति बाह एनडअ, प्रधानमन्त्री मोक्तार ओउने र रक्षामन्त्री सोउलेमेन डोउकोरेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
उनीहरूलाई राजधानी बामाकोबाट लगेर काटीस्थित सेनाको गणमा राखिएको छ। सरकार पुनर्गठन हुँदा सेनाका दुई उच्च अधिकारीहरूको पद फेरिएको केही घन्टामै सेनाले उनीहरूलाई नियन्त्रण लिएको हो।
यसअघि गत भदौमा सेनाले तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा लिएर राजीनामा दिन बाध्य पारेको थियो। सेनाको नयाँ कदमले उत्तरी क्षेत्रमा अलकायदा र इस्लामिक स्टेटले ठूलो क्षेत्र नियन्त्रणमा राखेको मालीमा थप अस्तव्यस्तता ल्याउने देखिएको छ।
मालीस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नियन्त्रणमा राखिएकाहरूलाई तत्काल बिनासर्त रिहा गर्न भनेका छन्।राष्ट्रपति बाह एनडअ, प्रधानमन्त्री मोक्तार ओउने सरकारलाई १८ महिनासम्म अन्तरिम सरकार चलाउने र चुनाव गरेर नागरिक शासन फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
यो बीचमा उनीहरूको सेनासँग असन्तुष्टि बढेको थियो। मुख्य पद सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न थालेपछि उनीहरू असन्तुष्ट थिए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएर सेनाले यसपालि के गर्न खोजेको भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
यता प्रशान्त महासागरमा अवस्थित टापु राष्ट्र सामोआकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले त्रिपालमूनि सपथ लिएकी छन्। अहिलेको सरकारले संसद भवनमा ताला लगाइदिएपछि फेइथ इन द वन गड पार्टीकी फिआइम नाओमी माताफाले सोमबार प्रागंणमा राखिएको त्रिपालमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
गत अप्रिल ९ मा भएको चुनावमा उनको दलले ४० वर्षदेखि सत्ता चलाइरहेको ह्युमन राइट्स प्रोटेक्सन पार्टीको जति नै सिट ल्याएको थियो। उक्त चुनावमा आफ्नो दलले बहुमत नल्याए पनि प्रधानमन्त्री तुइलाइपा सैलेले मालिलेगाओईले सत्ता छाड्न मानेका छैनन्। उनी दुई दशकदेखि लगातार सामोआका प्रधानमन्त्री छन्।
आइतबार राति सामोआका राष्ट्रप्रमुखले सोमबारको संसद बैठक स्थगित गरिदिएका थिए। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संसद बैठक स्थगित गर्नु गैरकानुनी भएको फैसला गरेपछि माताफाको पार्टीका सांसदहरू सोमबार संसद भवन पुगेका थिए तर त्यहाँ गेटमा ताल्चा लगाइएको थियो। लामो कानुनी लडा इँपछि सोमबारको संसद बैठक पनि सर्वोच्चले नै बोलाइदिएको थियो।
फेइथ इन द वन गड पार्टी प्रवक्ताले यसलाई रक्तपातविहीन कूको संज्ञा दिएका छन्। संसद भवनमा ताला लगाइएपछि माताफाले प्रांगण त्रिपाल टाँगेर सपथ लिएकी छन्। उनको सपथले अब कसरी वैधानिकता पाउँछ भन्ने बाँकी नै छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री मालिलेगाओई उनको सपथलाई ‘जोक’ भनेका छन्।
‘राष्ट्रप्रमुखले मात्र संसद बैठक बोलाएर सपथ खुवाउन सक्छन्। अरूले गरेको कुरा अवैधानिक हुन्छ,’ उनले भनेका छन्। सामोआ सन् १९६२ मा न्युजिल्यान्डको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको टापु मुलुक हो। २ लाख २ हजार जनसंख्या भएको सामोआको क्षेत्रफल २ हजार ८ सय ४२ वर्ग किलोमिटर छ।
अप्रिल ९ मा भएको चुनावमा दुबै दलले समान २५-२५ सिट जितेका थिए। १ जना स्वतन्त्र सांसदले माताफाको फेइथ इन द वन गड पार्टी रोजेपछि संसदमा उनको बहुमत पुगेको हो। सामोआको संविधानअनुसार ५१ सदस्यीय संसदमा १० प्रतिशत वा पाँच जना सांसद महिला हुनैपर्छ। त्यसो भएन भने सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर पराजित भएकी महिला उम्मेदवारलाई सांसद बनाइन्छ।
गत चुनावमा पाँच महिलाले सांसद जितेका थिए तर त्यो कूल संख्याको ९.८ प्रतिशतमात्रै भयो। सत्तारूढ पार्टीले त्यसैलाई मुद्दा बनायो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ पार्टीमा एक जना महिला सांसद थपिदिएको थियो। यो महिनाको सुरूमा सर्वोच्च अदालतले आयोगको उक्त निर्णयलाई खारेज गर्दै माताफाको पार्टीलाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिएको थियो।
यता सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भएको आन्दोलनका क्रममा म्यानमारमा अहिलेसम्म ८१८ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये तीन जनाको आइतबार मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
दुई युवकलाई जुन्ता सरकारका सुरक्षाकर्मीले कयाह राज्यमा गोली हानेर मारेका हुन् । सहरबाट माग भएअनुसार गाउँबाट खाद्य पदार्थ लिएर आइरहेका बेला उनीहरुको हत्या भएको जनाइएको छ । उनीहरुको शव पनि सैनिकले नै नियन्त्रणमा लिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
सैनिक सरकारले अहिले चार हजार २९६ जनालाई गिरफ्तार गरेर थुनामा राखेको छ भने तीमध्ये ९५ जनालाई अदालतले नै थुन्ने आदेश दिएको छ । त्यसैगरी एक हजार ८२२ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीचमा भएको झडपमा क्रममा अहिलेसम्म १३ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ ।
गत फेब्रअरी १ मा म्यानमारको सेनाले तत्कालीन सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर सत्ता हातमा लिएपछि अहिलेसम्म पनि आन्दोलन भइरहेको छ । सैन्य सरकारले म्यान्मारकी नेतृ आङ सान सुकीसहितका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरुलाई पनि नियन्त्रणमा राखेको छ ।
उनीहरुलाई नियन्त्रणमा राखे पनि आम नागरिक र राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट आन्दोलन भने निरन्तर भइरहेको छ । सेनाद्धारा गत फेब्रुअरी १ तारिखका दिन सत्ताच्यूत गरिएकी सुकीलाई सेनाले विभिन्न आरोपमा गिरफ्तार गरी जेलमा राखेको थियो ।
सुकीलाई लामो समयपछि सोमबार राजधानी न्यापिटअस्थित नगर परिषद भवनमा स्थापना गरिएको विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । उनका एक जना वकील मिन मिन सो ले टेलिफोनमा बताए अनुसार सुचीलाई राजधानी न्यापिटअस्थित नगर परिषद भवनमा स्थापना गरिएको विशेष अदालतमा उपस्थित हुनुअघि आफ्ना वकीलहरुसँग भेट गर्न दिइएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरुले अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिन्टसँग पनि भेटघाट गरेका छन् । मिन्ट विरुद्ध पनि सुचीका झैं आरोपहरु लगाइएका छन् । सुची विरुद्ध धेरैवटा फौजदारी अभियोग लगाइएको छ । यसअघि सुचीलाई भिडियो लिङ्क मार्फत अदालती सुनुवाई गरिएको थियो । उनलाई कुनै पनि कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिइएको थिएन ।
कानुन व्यवसायी मिन मिन सो ले म्यान्मारका जनताप्रति सुची ले सन्देश पठाउँदै नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी (एनएलडी) जनताको अधिकारको पक्षमा सदा झैं अटल भएर उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । सोमबारको सुनुवाईमा सुची विरुद्ध लगाइएका मुख्यतः छ वटा फौजदारी मुद्दामाथि केन्द्रित रहेर सोधपुछ गरिएको थियो ।
उनीमाथि सन् २०२० को चुनावी अभियानका क्रममा कोभिड–१९ का नियमहरु उल्लङ्घन गरेको, सुचीका अङ्गरक्षकका लागि वाकी–टाकीहरु गैरकानुनी रुपमा आयात गरेको, रेडियोको लाइसेन्स नलिएको तथा सार्वजनिक अस्थिरता फैल्याउने गरी समाजमा भ्रम फैल्याएको आरोप छ ।
सुची माथि लगाइएको सबैभन्दा गम्भीर आरोप उपनिवेशकालीन सरकारी गोप्यता सम्बन्धी ऐनको उल्लङ्घन हो । यस कानुनको उल्लङ्घन गर्नेमाथि १४ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्दछ र यस मुद्दाको सुनुवाई अर्कै अदालतले हेर्दैछ ।
सुची का समर्थकहरुले अदालती सुनुवाई राजनीतिक प्रेरित रहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुको भनाईमा सेनाले आफूले सत्ता हत्याएको कुरा प्रमाणित गर्न चाहिरेको छ । यदि यी मुद्दाहरुमा सुची दोषी ठहर भए आगामी एक वा दुई वर्षभित्र सेनाले गराउने भनिएको चुनावमा सुची लाई उठ्न दिइने छैन ।
कागजपत्रविहिन महिलालाई खुसीको खबर, अमेरिकामा आजैदेखि भयो यस्ताे नयाँ नियम